induction annealing process - အဘယ်ကြောင့်သော induction annealing ကိုသုံးပါ
induction Annealing လုပ်ငန်းစဉ်
HLQ induction သည်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည် induction အပူန်ဆောင်မှု induction annealing အပါအ ၀ င်သော induction annealing သည်သတ္တုပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများကိုတိကျမှန်ကန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Induction annealing သည်နူးညံ့ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်အတွက်ပုံမှန်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများထက်ကြီးမားသောအားသာချက်များကိုပေးစွမ်းသည်။ Induction annealing သည်တောက်ပသော annealing စဉ်အတွင်းအညစ်အကြေးများအားအပူဖယ်ရှားပေးသည်။ Induction annealing သည်ပျော့ပျောင်းသော annealing နှင့် stress-relief annealing တို့တွင်အသုံးပြုသည်။ သမားရိုးကျနည်းလမ်းများထက်ကြီးမားသောအားသာချက်များကိုပေးသည်။ Induction annealing သည်တောက်ပသော annealing အတွင်းရှိပစ္စည်းများအတွင်းရှိအညစ်အကြေးများအားအပူဖယ်ရှားပေးသည်။
induction Annealing ၎င်းသည်သတ္တုပစ္စည်းများကိုကြာရှည်စွာအပူ ပေး၍ အပူချိန်ကိုတဖြည်းဖြည်းအေးစေသည်။ အငွေ့ပြန်ခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ပစ္စည်း၏စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုပြောင်းလဲရန်တာဝန်ရှိသောအသေးစားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အန္တိမရည်မှန်းချက်သည်သတ္တု၏မာကျောမှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်၎င်းကိုပျော့ပြောင်းစေရန်ဖြစ်သည်။
အငှားချန်ဆောင်မှုများအထူးသဖြင့်ပစ္စည်းကို၎င်း၏အရှိဆုံးအရှိဆုံးအချက်သို့ယူလာ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ tempering ဖြစ်စဉ်သည်သတ္တုကိုပျော့ပြောင်းစေသော်လည်းဖြစ်နိုင်သမျှအပြည့်အဝမလုပ်နိုင်ပါ။ ဒေါသဒီဂရီသည်ပစ္စည်းပေါ်တွင် မူတည်၍ အများဆုံးအပူချိန်နှင့်အေးသောအချိန်၏အရှည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အအေးခံခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့ပါးစေရန်ဖြစ်စဉ် (သို့) စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေသည့်အငွေ့ကိုအသုံးပြုသည်။ ယခင်က strain- ခိုင်မာသတ္တုများ၏ပျော့ပြောင်းပြီးတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုများသည်ပလတ်စတစ်ပုံပျက်သောဖြစ်စဉ်များဖြစ်သည့်စက်နှင့်ကြိတ်ခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တစ်သားတည်းမဟုတ်သောအအေးသို့မဟုတ်အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ အကယ်၍ အတွင်းဖိအားများကိုမဖယ်ရှားပါကပုံပျက်။ အတိုင်ချခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အပိုင်းကိုအကြံပြုထားသည့်အပူချိန်သို့အပူပေးပြီးထိုအပူချိန်ကိုအခန်းအပူချိန်သို့တဖြည်းဖြည်းအအေးခံလိုက်သောအခါအပူဖိအားကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် annealing ကိုသုံးပါ?
မျက်မှောက်ခေတ် induction အပူသည်အခြားအပူနည်းများထက်များသောအားသာချက်များကိုပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် annealing applications များဖြစ်သည်။ induction ဖြင့်အပူပေးသောကြောင့်အပူချိန်အားအနည်းဆုံးအချိန်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ Solid state system သည်သေးငယ်သည့်smallရိယာများကိုတိကျသောထုတ်လုပ်မှုခွင့်ပြုချက်များအရအပူပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီးသတ္တုတစ်မျိုးချင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ induction ကိုမျက်နှာပြင်သို့မဟုတ်အပူဖြင့်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်သည်။ အမှုန့်သည်အချိန်၊ အပူချိန်နှင့်ပစ္စည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်နိုင်သည်။
induction annealing သည်ယေဘူယျဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်ပြီးသတ္တုတစ်မျိုးသည်အပူချိန်သို့သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်သို့ရည်ညွှန်းပြီးနောက်သန့်စင်ပြီးမိုက်ခရိုဖွဲ့စည်းပုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသောနှုန်းဖြင့်အအေးကိုရည်ညွှန်းသည်။ Induction ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သတ္တုသည် target နှင့်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအပူမဖြစ်စေဘဲထိန်းချုပ်ထားသောထပ်ခါတလဲလဲသံသရာတွင်အပူကိုအပူချိန်သို့လျင်မြန်စွာအပူပေးနိုင်သည်။ ferrous သတ္တုများအတွက်အအေးခံစက်များသည်များသောအားဖြင့်ပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်ရှိပြီး၊ ပုလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြေးနီသို့မဟုတ်ကြေးဝါကို non-ferrous သတ္တုများ, ရေကိုငြိမ်းသတ်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာအအေးခံနိုင်ပါသည်။ ရလဒ်သည်ပစ္စည်းကို“ ပျော့ပြောင်း” စေပြီးလိုအပ်သောပုံသဏ္toာန်အဖြစ်ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
induction Annealing ဝါယာကြိုးအပြောင်းအလဲနဲ့, တိကျစွာ tool ကိုဖွဲ့စည်းနှင့်ပြွန်ဖွဲ့စည်းခြင်း applications များအတွက်အသုံးပြုသည်။ induction annealing အတွက်ပုံမှန်ပစ္စည်းများမှာအလူမီနီယမ်၊ ကာဗွန်သံမဏိနှင့်ကာဗိုက်ပါဝင်သည်။ အချို့သော induction annealing ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာ - ၀ ယ်လိုအားအပေါ်စွမ်းအား၊ လျင်မြန်စွာအပူသံသရာ; ကြီးမားသောအပူareaရိယာ (ဥပမာမီးဖို) သို့စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်းကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း၊ convection ဖြစ်စဉ်များ၌ရှိသကဲ့သို့, ပတ်ဝန်းကျင်၏လေထုတိုက်ရိုက်အပူမဟုတ်ဘဲ; ပွင့်လင်းသောမီးလျှံနည်းလမ်းများထက်ပိုမိုလုံခြုံသောလုပ်ငန်းစဉ်၊ အော်ပရေတာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိသောပေးထားသောအပူချိန်မှပင်အပူနှင့်ယူနီဖောင်းအပူများအတွက်တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်မှု။
အဘယ်ကြောင့်သော့ချက် induction မီးဖိုများအတွက် HLQ သော induction ကိုရွေးချယ်?
ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရှိရုံးများနှင့် induction heating ။
induction annealing သတ္တုတစ်မျိုးသည်သတ်မှတ်ထားသောအပူချိန်သို့အပူပေးပြီးသန့်စင်သောမိုက်ခရိုဖွဲ့စည်းပုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသောနှုန်းဖြင့်အအေးပေးစက်ဖြင့်အပူကုသမှုဖြစ်သည်။ Induction အပူကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သတ္တုသည်ပစ်မှတ်ကိုထိစရာမလိုဘဲထိန်းချုပ်ထားသောထပ်ခါတလဲလဲသံသရာတွင်သတ္တုသည်အပူချိန်သို့လျင်မြန်စွာအပူပေးနိုင်သည်။ ရလဒ်သည်ပစ္စည်းကို“ ပျော့ပြောင်း” စေပြီးလိုအပ်သောပုံသဏ္toာန်အဖြစ်ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
induction အပူနှင့်အတူ annealing ၏အကျိုးကျေးဇူး:
၂) အပူနည်းသောနေရာနှင့်မလိုအပ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်မှု (ဥပမာ - မီးဖို)
ကျွန်ုပ်တို့သည် induction heat ကိုအထူးပြုထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင်ပေါင်းစည်းထားသော induction annealing solution များမှအကျိုးများသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အနိမ့်ဆုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောရလဒ်များကိုတိုးတက်စေသည့် induction annealing ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်အလွန်အကျွံစာရင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီဖြစ်ထွန်းစေသောဖြစ်ထွန်းမှုအထွက်နှုန်းရှိသည်။